ဂျော်နီ Hallyday ၏အိမ်ခြံမြေ: Laeticia နေဆဲလော်ရာနှင့်ဒါဝိဒ်နှင့်အတူတစ်ဦးသည်စစ်တိုက်ရှုံး! - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » တရားမျှတမှုကို • လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် ဂျော်နီ Hallyday ၏ "Estate: Laeticia နေဆဲလော်ရာနှင့်ဒါဝိဒ်နှင့်အတူတစ်ဦးသည်စစ်တိုက်ရှုံး!
ဂျော်နီ Hallyday ၏အိမ်ခြံမြေ: Laeticia နေဆဲလော်ရာနှင့်ဒါဝိဒ်နှင့်အတူတစ်ဦးသည်စစ်တိုက်ရှုံး!
Eliséoမင်းသမီး Emma Kamgang3မေလ 2019
စိတ်ဆိုးပရိတ်သတ် @ Laeticia Hallyday
အမေရိကန်တရားရုံးမှ 26 မေလပြန်ဆိုခံရဖို့ပြင်သစ်တရားမျှတမှုကဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုင်းငံ့၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက် 28 ဇွန်လရွှေ့ဆိုင်း။
ကျကွီးရှယျအိုမြားမှ Laeticia Hallyday ဂျော်နီနှင့်သားသမီးနှစ်ဦးအကြားဥပဒေကြောင်းအရစစ်တိုက်, လော်ရာနှင့်ဒါဝိဒ်အသစ်တစ်ခုဇာတ်လမ်းတွဲဒီဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 1er မေလတွင်ခဲ့သည် နှစ်ဖက်စလုံးမေလ 28 အပေါ် Nanterre တရားရုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်နေစဉ်, ဒီရက်စွဲကိုအဆုံးအဖြတ်ဖြစ်လိမ့်မည်ပိုပိုပြီးပုံရသည်။ ဂိမ်းမှာတော့ဂျော်နီ Hallyday ၏အမွေအဘယ်သူတစ်ဦးအားလုံး၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိတစ်ဦးယုံကြည်မှုထားခြင်းဖြစ်သည်လိမ့်မယ် Laeticia, သမီးနှစ်ယောက်ရွှင်လန်းခြင်းနှင့်ကျောက်စိမ်းရန်, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရာအတွက် bequeathed ။
အပေါ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးသောတစ်ဦးကအမေရိကန်တရားရုံး အမေရိကန်မြေပေါ်တွင်အခြို့သောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဂျော်နီ Hallyday ၏လွှဲပြောင်းပြင်သစ်တရားရုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုင်းငံ့ 26 ဇွန်လရန်၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်ရွှေ့ဆိုင်း, ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က AFP ငါ့ကို Pierre-ဂျင်း Douvier ၏ရှေ့နေဒါဝိဒ်သည် Hallyday ကဆိုသည်။
"ယနေ့အထိကြားနာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအမေရိကန်တရားသူကြီးက 26 ဇွန်လလာမယ့်ကြားနာရွှေ့ဆိုင်းရန်ဆုံးဖြတ်"မာစတာ Pierre-ဂျင်း Douvier ကဆိုသည်။« ပြင်သစ်တရားရုံးကျော်လွှားဖို့ကြိုးပမ်းမှု "ပျက်ကွက်, သူကဆက်ပြောသည်။ "အဘယ်သူမျှမပိုင်ဆိုင်မှုတောင်းဆိုမှုများ Trustees (မန်နေဂျာ) ရှိနေသော်လည်းယုံကြည်မှုကိုပူးတွဲငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီ၏ထဲသို့သွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ "
အခွင့်အာဏာပိုင်းတွင် 30 ဧပြီလဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူမသည်ပြင်သစ်ဆုံးဖြတ်ချက်စောင့်ဆိုင်းပါလိမ့်မယ်။ လော်ရာ Smet နှင့်ဒါဝိဒ် Hallyday ကြောင့်အမွေဥစ္စာ၏မေးခွန်းကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ရမညျဟုပြင်သစ်တွင်ကြောင်းယုံကြည်Laeticia အမေရိကန်တရားရုံးမှကြယ်၏နောက်ဆုံးနေအိမ်သို့ကိစ္စတွင်ယူလိုလားနေစဉ်။ တစ်ဦးကကြားနာပြင်သစ်တရားရုံးများ၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဆနျးစစျဖို့မတ်လ 29 Nanterre တွင်ကျင်းပခဲ့သည်: ထို့ကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်မေလ 28 အပေါ်လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်.
ဒီဇင်ဘာလ 2017, ၎င်းတို့၏အဘ, Laeticia Hallyday ၏မုဆိုးမဖို့ rocker ၏နှစ်ခုအကွီးဆုံးကလေးများအကြားတရားဝင်စစ်တိုက်လျက်, သူတို့သမီးနှစ်ယောက်, ကျောက်စိမ်းနှင့်ရွှင်လန်းအတွက်အဆိုတော်ရဲ့သေခြင်းကတည်းက။ အလိုတော်ခုနှစ်တွင်ဂျော်နီ Hallyday သည်သူ၏နှစ်ခုကျကွီးရှယျအိုမြားဖို့ဘာမျှမချန်ထား, သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးဇနီးရန်၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအပေါငျးတို့သ bequeathed ခဲ့သည်။
လော်ရာ Smet နှင့်ဒါဝိဒ် Hallyday ကြယ်၏နောက်ဆုံးနေအိမ်သို့ကြောင့် Laetitia အမေရိကန်တရားရုံးမှအမှုယူလိုလားနေချိန်မှာ, အမွေဆက်ခံ၏မေးခွန်းကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ရမညျဟုပြင်သစ်တွင်ကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။
Senior ပြီးသားယုံကြည်မှုအတွက်ချပြီးရှောင်ရှားရန်, ပြင်သစ်တရားမျှတမှုအေးခဲပြင်သစ်ကိုမှန်ကန်အဆိုတော်များ၏အိမ်ခြံမြေ, သူ၏အိုင်ယာလန်သမ္မတဟောင်း Mary Robinson နှင့်မူပိုင်ခွင့်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ရရှိသောပါပြီ။
"ကျနော့်ရဲ့ဘဝအနှစ် 50 မှစတင်ခဲ့": Celine Dion Rene Angelil ၏သေသောနောက်, ငုံ?
Hencha အားဖြင့်စွပ်စွဲ, Serge Aurier ၏စွပ်စွဲမြှောင်အရာအားလုံးကိုငြင်းပယ်ခြင်းနှင့်စွပ်စွဲ ...